RASMI: Atletico Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Ay Heshiis La Gaadhay Bartilmaameedkii Kooxaha Arsenal Iyo Liverpool Ee Thomas Lemar. – GOOL24.NET
RASMI: Atletico Madrid Oo Ku Dhawaaqday In Ay Heshiis La Gaadhay Bartilmaameedkii Kooxaha Arsenal Iyo Liverpool Ee Thomas Lemar.
Kooxda Atletico Madrid ayaa ku dhawaaqday in ay kooxda ree France ee AS Monaco heshiis kala gaadhay saxiixa xidiga bartilmaameedka waqtiga dheer u ahaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool ee Thomas Lemar. Atletico Madrid ayaa si hordhac ah ugu sii dhawaaqday heshiiska Lemar iyada oo marka uu koobka aduunka soo dhamaysto si rasmi ah u dhamaystiri doonta.
Kooxda Atletico Madrid ayaa si layaableh ugu guulaysatay xidiga ree France ee Thomas Lemar kaas oo xagaagii la soo dhaafay ay lacag qaali ah ku waayeen kooxaha Liverpool iyo Arsenal balse hadda waxa uu la shaqayn doonaa Diego Simeone.
Heshiiska Lemar ee Atletico Madrid ayaa laba arimood keenay kuwaas oo kala ah in la aamino in uu yahay badalka Antoine Griezmann kaas oo la filayo in uu Barcelona ku biiri doon halka dad kale aaminsan yihiin in Atletico Madrid heshiiskan u samaysay sidii ay Griezmann laftiisa ugu qancin lahayd in uu diido Barcelona.
War saxaafadeed rasmi ah oo ka soo baxay Atletico Madrid ayaa lagu yidhi: ” Atletico de Madrid waxay heshiis hordhac ah AS Monaco kala gaadhay la wareegista kooxdeena ee Thomas Lemar. Maalmaha soo socda waxay labada kooxood ka shaqayn doonaan in la xidho heshiiska ee la wareegis qeexan”.
Waxaana war saxaafadeedka Atletico Madrid lagu xusay in waqti xaadirkan uu Thomas Lemar diirada saarayo koobka aduunka iyo waajibaadka xulka qarankiisa France ee Russia ku sugan kuwaas oo koobka aduunka isku diyaarinaya.
Waxaa sidoo kale warbixin dheer lagu sheegay taariikhda iyo halkii uu Thomas lemar ka soo bilaabay waayihiisa ciyaareed iyada oo waliba koox kasta oo uu ka soo ciyaaray wax qabadkiisii lagu xusay. Atletico Madrid ayaa guul wayn ka soo hoysay suuqa kala iibsiga iyada oo kooxaha waa wayn ee Premier league ka horqaaday saxiixa Lemar.
Maadaama oo aan wali heshiiska la dhamaystirin waxay Atletico Madrid ka gaabsatay in ay ka hadasho qiimaha uu Thomas Lemar kooxdeeda ugu soo biirayo waxaana la sheegay in maalmaha soo socda ay labada kooxood isla dhamaystiri doonaan heshiiska ay hadda wada gaadheen.